निपा भा’इरस फैलाउने चमेरो नेपालमै, सं’क्रमणकाे जाे’खिम !
काठमाडौँ : नेपाल पनि निपा भा’इरस सं’क्रमणको उच्च जो’खिममा रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल अनुसन्धान शाखाका संयोजक डा. शेरबहादुर पुनका अनुसार निपा भा’इरस सं’क्रमण गराउने प्रजातिको चमेरो नेपालमा पाइएको छ।
त्यसकारण नेपाल उक्त भा’इरस सं’क्रमणको उच्च जो’खिममा परेको उनको भनाइ छ।उनका अनुसार नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको भूभागमा सो प्रजातिको चमेरो पाइन्छ। ‘काठमाडौं उपत्यकाको केशरमहलमा समेत यो प्रजातिको चमेरो प्रशस्तै देखिन्छ,’ उनले भने। निपा भा’इरस चमेरोबाट बंगुर, गाईगोरु र तिनीहरूबाट मानसिमा सर्ने गर्छ।
मानिसबाट मानसिमा पनि यो भाइरस फैलिने गर्छ। यो भाइरस ‘फुट ब्याट जा टेरोपस’ प्रजातिको चमेरोमा पाइन्छ।उक्त प्रजातिको चमेराले टोेकेको फलफूल राम्रोसँग नपखाली खाएको अवस्थामा यो भा’इरस मानिसमा सर्छ। संक्रमित व्यक्तिका दिशा, पिसाब, थुक, पसिना, रगत आदिबाट समेत अन्य व्यक्तिमा यो भा’इरस सर्ने गर्छ। बंगुर व्यवसायीहरू त यो सं’क्रमणको झनै जो’खिममा हु्न्छन्। याे खबर नागरिक दैनिकमा छ ।
२०७८ भाद्र २९, मंगलवार प्रकाशित 1 Minute 85 Views